Izindaba - Ukusetshenziswa kwe-PVC
I-PVC yi-thermoplastic ejwayelekile yokwenza umsebenzi jikelele futhi inezinhlobonhlobo zezinhlelo zokusebenza. Okwamanje luhlobo lwesibili ngobukhulu lomkhiqizo wepulasitiki olandela okwesibili ku-polyethylene esezingeni eliphansi.
Imikhiqizo ingahlukaniswa ngemikhiqizo enzima nemikhiqizo ethambile:
Ukusetshenziswa okukhulu kwemikhiqizo enzima ngamapayipi nokufakwa, nokunye ukusetshenziswa okuyinhloko ngamapaneli odonga, ukwahlukanisa, iminyango namawindi, izinto zokupakisha, njll.
Imikhiqizo ethambile isetshenziselwa amafilimu, amashidi, izintambo nezintambo, izinto zokwenziwa phansi, isikhumba sokwenziwa, njll.
Iyisebenzisela ini i-PVC?
Ukwehlukahluka kwezicelo ze-PVC kuphonsela inselelo umcabango. Empilweni yansuku zonke, zisizungezile: amaphrofayili wokwakha, amadivayisi wezokwelapha, ulwelwesi lokufulela, amakhadi esikweletu, amathoyizi ezingane, namapayipi amanzi negesi. Zimbalwa ezinye izinto eziguquguqukayo noma ezikwazi ukufeza ukucaciswa okunjalo. Ngale ndlela, i-PVC ikhuthaza ubuqambi kanye nokwenza izinto ezintsha, okwenza amathuba amasha atholakale nsuku zonke.
Kungani usebenzisa i-PVC?
Vele ngoba imikhiqizo ye-PVC yenza impilo iphephe, ilethe induduzo nenjabulo, futhi isize ukonga imithombo yemvelo nokulwa nokuguquka kwesimo sezulu. Futhi, ngenxa yesilinganiso esihle kakhulu sokusebenza kwezindleko, i-PVC ivumela abantu bazo zonke izigaba zemali engenayo ukufinyelela kwimikhiqizo yayo.
Ngabe i-PVC inegalelo kanjani emhlabeni ophephile?
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani i-PVC nokuphepha kuxhunyiwe. Ngenxa yezici zobuchwepheshe ezingenakuqhathaniswa, i-PVC iyimpahla esetshenziswa kakhulu yamadivayisi wezokwelapha asindisa impilo futhi angasetshenziswa. Isibonelo, i-PVC tubing yezokwelapha ayikhiphi noma iphule, futhi kulula ukuyifaka inzalo. Ngenxa yokumelana nomlilo kwe-PVC, izintambo nezintambo ezifakwe nge-PVC zivimbela izingozi zikagesi ezingaba yingozi. Ngaphezu kwalokho, i-PVC yinto eqinile. Isetshenziswa ezingxenyeni zemoto, i-PVC isiza ukunciphisa ubungozi bokulimala uma kwenzeka izingozi.
Isikhathi Iposi: Feb-02-2021